စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆိုင်တံခါးဝမှာ ဆိုင်းဘုတ် တစ်ခုထပ်ချိတ်သည်။ "ခွေးပေါက်ကလေးများ ရောင်းရန်ရှိသည်တဲ့" သည်ကြော်ငြာမျိုးကိုကလေးတွေအလွန်စိတ်ဝင် စားသည်။ သူတို့က ခွေးချစ်တတ်သူများ မဟုတ်လား။ ခဏအကြာမှာပင် ကလေး တစ်ယောက်ဆိုင်ပေါက်ဝ သို့ရောက်လာသည်။
"ခွေးလေးတစ်ကောင်ဘယ်လောက်ရောင်းသလဲခင်ဗျ . . . . "သူကမေးသည်။
"ဒေါ်လာ ၃၀ က ၅၀ အထိ ဈေးအစားစား ရှိတယ် . . . "ဆိုင်ရှင်ကဖြေတယ်။
ကောင်လေး က သူ့အိတ်ထဲမှာ ရှိသည့် ပိုက်ဆံအကြွေ တွေနှိုက်ထုတ်သည်။
"ကျွန်တော့်မှာ ၂ဒေါ်လာနဲ့ ၃၇ဆင့်ရှိပါတယ်၊ခွေးလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမလားခင်ဗျ. . . "
ဆိုင်ရှင်ကပြုံးသည်။ ထို့နောက် ခွေးအိမ်ထဲမှာ ရှိနေသည့် ခွေးမကြီးကိုလေချွန်ပြီးခေါ်လိုက်သည်။ ခွေးမကြီး ဆိုင်ထဲဝင်လာတော့ သူ့နောက်က ခွေးပေါက်ကလေးငါးကောင်တန်းစီ၍ လိုက်ပါလာသည်။ ပိစိကွေးလေးတွေ၊ အမွှေးကသိပ်ရှည်တော့ တစ်ကိုယ်လုံး အမွှေးတွေဖုံးကာ လုံးနေသည်။ အဲသည့်အထဲမှတစ်ကောင်က ဟိုးနောက်မှာ ပြတ်ကျန်ခဲ့သည်။ ထော့တီးထော့နဲ့နှင့် လမ်းမလျှောက်တတ်သလို။
ကောင်လေးက သည်ဟာလေး မြင်တော့ချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားသွားသည်။
ခွေးလေးမှာ မွေးကတည်းက တင်ပါးဆုံရိုးပါမလာသဖြင့် တစ်သက်လုံး ခြေထော့နဲ့ဖြစ်နေမည်ဟု တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ကပြောဆိုသည့်အကြောင်း ဆိုင်ရှင် က ရှင်းပြ သည်။
"ဒီခွေးလေး ကျွန်တော်ဝယ်ချင်တယ်ဗျာ သူကဆိုသည်။"
သည်စကားကြားတော့ ကောင်လေးမျက်နှာပျက်သွားသည်။ သူကမကျေနပ်သည့်မျက်နှာမျိုးနှင့် ဆိုင်ရှင်ကြီးကိုမော့ ပြီဲးပြန်ပြောသည်။
"အလကားပေးတာ ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးခင်ဗျ၊ ဒီခွေးလေးလဲကျန်တဲ့ခွေးတွေလို တန်ဖိုးရှိတာပဲခင်ဗျ၊ တစ်ပြားသားမှမလျော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တန်ဖိုးအပြည့်ပဲပေးမယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာ လောလောဆယ် ၂ ဒေါ်လာနဲ့ ၃၇ ဆင့်ပဲ ပါတယ်၊ အခု အဲဒါယူထားပါ။ နောက်ကို တစ်လ ဆင့်ငါးဆယ်ဆီ ကျေတဲ့အထိ ကျွန်တော်ဆပ်ပါ့မယ်. . . "
သို့သော် ဆိုင်ရှင်က အလျှော့မပေး ။
"မ၀ယ်ပါနဲ့ကလေးရ၊ နောက်ကျတော့မင်းစိတ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီခွေးလေးက ပြေးနိုင်လွှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းနဲ့ခုန်ပေါက်ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. . . "
သည်အခါကျတော့မှ ကောင်လေးက ဆိုင်ရှင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ကာ သူ့ဘောင်းဘီအောက်နားစကို လှန်၍ပြရင်း လေသံတိုးတိုးနှင့်ပြောသည်။
"ကျွန်တော်လဲ ကောင်းကောင်းမပြေးနိုင်ပါဘူးဗျာ၊ ပါပီလေးခမြာမှာ သူ့ကိုကိုယ်ချင်းစာမယ့် လူတစ်ယောက်တော့ ရှိဖို့လိုမှာပေါ့တဲ့။"
ကောင်လေး၏ခြေထောက်ကလေးက အတော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပင် သိမ်နေကောက်နေကာ လမ်းလျှာက်နိုင်ရန်အတွက် သတ္တုချုပ်တံများဖြင့်အားဖြည့်ပေးထားရလေသည်။
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, May 21, 2011
မိုးခါး May 21, 2011 at 5:22 PM
ဆရာဖေမြင့်စာတွေကိုတော့ ဖတ်ပြီးလည်း ပြန်ဖတ် .. ဖတ်ကောင်းနေတာပဲ ..း))
mstint May 21, 2011 at 7:12 PM
ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ခံစားရသူဟာ သာမန်လူထက် ပိုပြီး နားလည်တာပေါ့နော်။
မြစ်ကျိုးအင်း May 22, 2011 at 12:19 AM
ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးမှ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပိုပြီး ထားနိင်တာပဲ။
နေ၀ဿန် May 22, 2011 at 3:52 PM
အဲဒီ စာလေးကို ဘယ်အချိန်ဖတ်ဖတ် သိပ်သဘောကျလွန်းတယ်...း)))..
အင်္ဂါဟူး May 23, 2011 at 7:19 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) May 24, 2011 at 10:46 AM
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးကို ထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြထားတဲ့ ချစ်စဖွယ် စာသားလေးတွေပါဘဲနော်
ချစ်ခြင်းအလင်္ကာ May 25, 2011 at 7:07 PM
ခနွဲ May 26, 2011 at 1:18 AM
ဘဒ္ဒ၀ဂ္ဂီ ညီနောင်တို့ မိန်းမရှာရင်း ဘုရားနှင့်တွေ့၍ ...